युवा साहित्यकार युवराज नया�घरे र 'ब्रह्‍मपुत्रलाइ प्रेमपत्र' निबन्धलार्इ नियाल्दा : | samakalinsahitya.com
युवा साहित्यकार युवराज नया�घरे र 'ब्रह्‍मपुत्रलाइ प्रेमपत्र' निबन्धलार्इ नियाल्दा :
- देवेन्द्रप्रसाद उप्रेती
पिता हरिहर सुवेदी र माता तुलसा सुवेदीका साथमा वि.सं. २०२६ असोज १९ गते प्रक ृतिको हरियालीयुत्त काख इलाममा जन्मनुभएका युवराज नया�घरे (सुवेदी) युवा पुस्तामा निबन्धको फ�ाटमा चर्चित व्यत्तmित्वको रुपमा देखिनुभएको छ । इलाममै प्रारम्भिक शिक्ष्ाा अध्ययन गनर्ुभएको नया�घरे विर्तामोडको अनारमनी स्कुलमा पनि अध्ययनयात्रा अगाडि बढाउ�दै मोरङबाट २०४० सालमा एस.एल.सी. दिनुभएको थियो । एस.एल.सी. दिएपछि उहा� २०४१ सालमा काडमाडौं प्रवेश गरी स्नातकसम्मको आैपचारिक शिक्ष्ाा प्राप्त गनर्ुभयो । लेखनकार्यमा अधिकांश समय दिनुपनर्े भएकाले स्नातकोत्तरको आैपचारिक अध्ययनमा तगारो नै लागेको भए पनि निकट भविष्यमा नै यो तह पार लगाउने सोचमा हुनुहुन्छ ।
काठमाण्डौं आउ�दा साहित्यकार वासु शशीको घरमा डेरा लिर्इ जीवनरथ अगाडि बढाउन पुगेका नया�घरेमा साहित्यप्रतिको छाप अभm मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको थियो । काठमाण्डौंमै रह�दा साहित्यकार यज्ञनिधि दाहालसंग सहयात्री बनी साहित्यसंसार कार्यत्रmम सञ्चालन गर्न पुग्नुभएको नया�घरे रेडियो नेपालमा पनि केही समय कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । हाल उहा� साहित्यिक र अन्य विविध क्ष्ोत्रसंग आबद्ध भर्इ कार्यरत हुनुहुन्छ ।
विशेष्ा सेक्सपियर र एन्टभ चेखबका हिन्दीमा अनुवादित रचनाहरु पढ्‍न मन पराउने नया�घरेले स्वाध्ययनबाट प्रशस्त ज्ञान आर्जन गनर्ुभएको छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, शङ्‍कर लामिछाने, क ृष्ण्ा धरावासी, डा. माधव पोखरेल र पारिजातका रचनाहरु विशेष्ा पढ्‍न मन पराउने नया�घरे यथार्थमा भन्नुपर्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ ।
युवराज नया�घरेले २०४० सालमा 'भानु' पत्रिकामा कविता छपार्इ साहित्ययात्रा थालनी गनर्ुभएको थियो । मुख्य पेसा क ृष्ािलार्इ आत्मसात्‍ गरेको यो परिबारमा माता तुलसा सुवेदी धार्मिक कार्यमा संलग्न भएको देखेपछि बाल्यकालदेखि नै नया�घरेमा धार्मिक छाप परेकाले दयालु र उदार स्वभाव पाइन्छ । अहिले पनि कसैसंग भेट हु�दा रसिला कुरा गरी मान्छेलार्इ खुसी बनाउने स्वभाव छ, उहा�को । प्राय देशको चिन्ता लिने नया�घरे भावुक र कल्पनाशील ह ृदय भएको कारण्ाले गर्दा एउटा नया� कुरा पाउनेबित्तकिै घण्टौंसम्म कल्पनामा हराउने आदत छ । प्रक ृतिको काखमा विचरण्ा गर्न पाउ�दा अत्यन्त हष्ाित हुने उहा�को बानी छ । सुरुमा कविता र गीतको क्ष्ोत्रमा कलम चलाउनुभएको नया�घरेका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा प्रशस्त पुmटकर रचनाहरु प्रकाशित भएका छन्‍i ।
समयको गतिसंगै निबन्धलार्इ आप्‍mनो मुख्य क्ष्ोत्र बनाउनुभएका नया�घरेले देहायबमोजिमका निबन्धसंग्रह प्रकाशन गरिसक्नुभएको छ :
(क) संवेदनाका स्वरहरु निबन्धसंग्रह (२०५४: प्रकाशक स्वयम्‍ , काठमाडौं)
(ख) मुहूर्तको वरिपरि निबन्धसंग्रह (२०५५: साभmा प्रकाशन, काठमाडौं)
(ग) मखुन्डाको मन निबन्धसंग्रह (२०५५: ने.रा.प्र.प्र., काठमाडौं)
(घ) काठमाडौंलार्इ कोर्रा निबन्धसंग्रह (२०५८: तन्नेरी प्रकाशन, काठमाडौं)
(ङ) नीलडाम निबन्धसंग्रह (२०६१: बगर फाउन्डेसन प्रकाशन, काठमाडौं)
यसका अतिरित्तm प्रशस्त पुmटकर रचनाहरु पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन्‍ र लेखनकार्य पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ ।
नया�घरेको समग्र साहित्यको कदर गर्दै 'राष्टि्रय प्रतिभा पुरस्कार' (२०५६), 'युवावर्ष्ा मोती पुरस्कार' (२०६१) र 'काठमाडौंलार्इ कोर्रा' निबन्धसंग्रहको लागि 'उत्तम शान्ति पुरस्कार' (२०५८) प्रदान गरिएको छ । यसका अतिरित्तm विभिन्न क्ष्ोत्रमा अतिथिको रुपमा आमन्त्रण्ा गरी सम्मानसमेत पाउनुभएको छ ।
नया�घरेका समग्र क ृतिहरुलार्इ अध्ययन गर्दा ब�ुदागतरुपमा निम्नलिखित साहित्यिक विशेष्ाताहरु पाइन्छ :
(क) परम्परागत निबन्धलेखन शैलीभन्दा बेग्लै तरिकाले प्रस्तुत भर्इ नया�पन दिन चाहने,
(ख) परिस्कारमा बढी ध्यान दिन,े
(ग) प्रगतिवादलार्इ आत्मसात्‍ गरी जीवनमा आशावादी स्वर घन्काउने,
(घ) राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी,
(ङ) भाष्ाामा बढी खेल्न रुचाउने ।
यसका साथै निबन्धभित्र प्रवेश गर्दा छोटाछोटा वाक्यगठन, प्रतीक र बिम्बको प्रयोग गरी पोथी गद्य शैलीमा बढी भुmकाब राखेको पाइन्छ ।
प्रस्तुत छ, 'नीलडाम' निबन्धसंग्रहमा रहेको निबन्ध 'ब्रह्‍मपुत्रलार्इ प्रेमपत्र' निबन्धको विवेचना :
ब्रह्‍मपुत्रलार्इ प्रेमपत्र :
भारतको असाम, ब्रह्‍मपुत्रको किनारमा बसोबास गरिरहेका नेपालीको कथा यस यात्रा निबन्धमा समेटिएको छ । प्रशस्त नेपालीहरु आदि कालदेखि बसोबास गर्दै आएका र हाल पनि नेपालीले आप्‍mनो गरी खाने भूमिको रुपमा यस क्ष्ोत्रलार्इ प्रयोग गर्दै आएका छन्‍ । यस ठाउ�संग नेपालीहरुको घनिष्ठ सम्बन्ध जोडिएको छ ।
नेपालीहरुले ब्रह्‍मपुत्र आसपासमा रहेर पनि आप्‍mनो नेपालीत्व र संस्कारलार्इ कदापि भुलेका छैनन्‍ । जति ब्रह्‍मपुत्र नदी कञ्चन छ, त्यति नै नेपालीहरु आप्‍mनो आस्थामा र कर्तव्यमा कञ्चन छन्‍ । नेपालीहरु त्यहा� बसेर विविध क्ष्ोत्रमा कार्य गर्दछन्‍ । त्यहा� बसेर नेपाली भाष्ााको विष्ायमा लडाइ� लडी अस्तित्व रक्ष्ााको निम्ति सदाबहार संघर्ष्ाशील नेपालीको कथा हो, यो 'ब्रह्‍मपुत्रलार्इ प्रेमपत्र' ।
नेपालमा विभिन्न दु:ख र समस्याग्रस्त नेपालीहरु कामको खोजीमा त्यतातिर पलायन भर्इ आप्‍mनो पुस्तौंपुस्ता त्यस क्ष्ोत्रमा बिताइरहेका छन्‍ । स्वदेश र विदेश भनी तारबार लगाउन खोज्नु त एउटा राजनीतिको परिभाष्ाा हुन सक्छ, तर साहित्य र गीतको भाष्ाामा देश विभाजित देखि�दैन किनभने आकाश कही� पनि विभाजित छैन । प्रक ृति विभाजित नभएपछि देश कहा�बाट विभाजित हुन सक्छ ? यो त एउटा क ृत्रिम सीमाङ्‍कन हो । नेपालीहरु जहा� गएर बसे पनि आप्‍mनो जन्मभूमि, भाष्ाा र संस्कारलार्इ भुल्न सक्दा रहेनछन्‍ । बाहिरिएका नेपालीहरु बिपनीमा बाहिरै भए पनि सपनीमा आप्‍mनो ठाउ�को भmभmल्कोले सदा सताइरह�दो रहेछ । नेपालीले त्यस क्ष्ोत्रमा हरेक वस्तुलार्इ प्रेम गरेका छन्‍ । प्रेमका भोका नेपाली जहा�तही� मायालार्इ आत्मसात्‍ गर्दा रहेछन्‍ ।
गाइपालन, भैंसीपालन, नरीवल, सुपारी र अलैंची व्यवसायबाट आप्‍mनो जीवनरथ अगाडि बढाउ�दै आएका नेपालीले डेरी सञ्चालनदेखि राजनीतिका पाठ पनि पढेका छन्‍ , त्यहा� । यही सेरोफेरोमा यस निबन्धको विष्ायवस्तु तन्किएको छ ।
कञ्चन शब्द र पदावलीहरुको प्रयोग युवराज नया�घरेका निबन्धमा पाइन्छ । कसिएको भाष्ाा र माभिmएका शब्द नया�घरेका निबन्धको मूल विशेष्ाता हो । तत्सम, तद्‍भव र आगन्तुक (सनराइज, सनसेट) शब्दसमेत मिसिएको उहा�को भाष्ाामा मिठास पाइन्छ । कहिलेकाही� त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका निबन्ध पो पढ्‍दै छु कि भन्ने लाग्दछ, नया�घरेका निबन्ध पढ्‍दा । छोटाछोटा वाक्यगठन, गद्य कवितात्मक शैलीले सुनमा सुगन्ध थप्ने कार्य गरेको छ । पोथी गद्यको शैलीलार्इ आत्मसात्‍ गनर्े प्रयास गर्दा व्याकरण्ािक आधारमा कतैकतै पदसङ्‍गति भङ्‍ग भएको देखिन्छ । जस्तै : 'आमाको रहर पूरा गरें मैले' । यस पक्ष्ालार्इ लयात्मक शैलीको प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता अन्य केही वाक्यहरु पाइन्छन्‍ । "कुनै अवरोधको आदेश भए पो डराउनु । कुनै रोकटोकको छेकछन्द भए पो तर्सिनु । कुनै छेकथुनको कानुन भए पो सतर्किनु ।" यी वाक्यहरुलार्इ ध्यान दि�दा यहा� पोथी गद्यको शैली पाइन्छ । निबन्धमा प्रयोग भएका भmर्रा, अनुकरण्ाात्मक, प्रतीकात्मक शब्द र बिम्बलार्इ घाम नुहायो पानीमा, आप्‍mनै तारानामा बग्नु, तारको भmल्लरमल्लर, सूक्ष्मतामा अटेको विशालता, सिम्फोनीका सितारा, गल्र्यामगुलर्ुम, कविताले भ्याट लाउ�दैन, गीतले कप्‍mयर्ू लाउ�दैन जस्ता शब्द र पदावलीले स्पष्ट पार्दछन्‍ । निबन्धको सुरुवातमै विशेष्ा किसिमको पदावलीको प्रयोग गरी उद्‍गार चिह्‍नको प्रयोग गनर् पनि निबन्धकारको विशेष्ाता देखिन्छ । जस्तै : यस निबन्धमा 'घाम नुहायो पानीमा � ' भन्ने पदावलीको प्रयोग गरिएको छ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि यो शैलीलार्इ निकै नै मनपराएका थिए । वस्तुत: आत्मपरक निबन्ध (यात्रा निबन्धजस्तो लाग्ने) र वस्तुपरक निबन्धमा सिद्धहस्त बन्न पुगेका युवराज नया�घरेको शैली बौद्धिक देखिन्छ ।
यो ब्रह्‍मपुत्रलार्इ प्रेमपत्र शीर्ष्ाकको यात्रा निबन्ध सिर्जना गनर्ुको उद्देश्य निबन्धकार ब्रह्‍मपुत्रको किनार, असाम जहा� नेपालीपन छचल्किरहेको छ, नेपालीका सुखदु:ख समेटिएका छन्‍ , त्यस क्ष्ोत्रको भ्रमण्ा र त्यहा�का बासिन्दासंग प्रत्यक्ष्ा कुराकानी गर्दा प्राप्त अनुभवलार्इ शब्दमा उतानर्ु र नेपालीत्व अनि जुनसुकै ठाउ�मा भए पनि आप्‍mनोपन कहिले पनि बिलाउ�दैन, हराउ�दैन भनेर देखाउनु नै निबन्धकारको उद्देश्य रहेको छ । ब्रह्‍मपुत्रको किनार, असाममा नेपालीहरु किन र कसरी पुगेका छन्‍, त्यहा� उनीहरुले गरेको व्यवसाय र आप्‍mनोपनमाथि सदा गर्व गनर्े नेपालीहरुको विशेष्ाता दर्शाउनु लेखकीय उद्देश्य हो । जसरी लीलबहादुर क्ष्ोत्री 'ब्रह्‍मपुत्रका छेउछाउ' शीर्ष्ाकको उपन्यास सिर्जना गरी त्यहा�का नेपाली पात्रलार्इ चलायमान गरेका छन्‍ ,त्यसरी नै निबन्धकारले त्यहा�का नेपालीहरुसंग भिजिसकेपछि अनुभवलार्इ लेखनीमार्पmत्‍ शब्दमा नउतारी बस्न सकेनन्‍ । नेपालीहरु जहा�सुकै गएर बसे पनि आप्‍mनो संस्कार, आप्‍mनो राष्ट्र र कामकर्तव्यलार्इ भुल्न नसकेको स्थिति देखेपछि लेखक स्वयं भावविभोर भएका छन्‍ अनि प्रश्न गर्न पुग्छन्‍ 'आकाश कहा� विभाजित छ ?' बाबुबाजेका पालादेखि काम र मामको खोजीमा पहाडी र अन्य भूभागबाट प्रवेश गरेका नेपालीको कथा र आस्था नै यस निबन्धको मूल निचोड हो ।
यिनै आधारमा हामीले निबन्धकार युवराज नया�घरेलार्इ चिन्ने प्रयास गर्दा निबन्धको क्ष्ोत्रमा स्थापित व्यत्तmित्वको रुपमा हामीले चिन्नुपर्दछ । निबन्धमा विष्ायवस्तु भएर मात्र पुग्दैन, प्राप्त विष्ायवस्तुलार्इ शैलीले रङ्‍गाउ�छ । त्यो शैली कोपिलाको रुपमा होइन,एउटा फत्रिmएको गुलाबको रुपमा मैले पाएको छु । निबन्धकारका निबन्धहरु ब्ौद्धिकताले रङ्‍गिएका हु�दा सामान्य पाठकहरुले आकलन गर्न र रसास्वादन गर्न भने समस्या नै देखिन्छ ।